पुरुषहरूको लागि उत्तम लामो कपाल कटाई, कुनलाई तपाईं रुचाउनुहुन्छ? | स्टाइलिश पुरुषहरू
पुरुषहरुको लागी लामो कपाल
पाको मारिया गार्सिया | | कपाल शैली
पुरुषहरू समयको साथ रूढीवादी छोटो चालाक कपालका स्टाइलहरू बाट भाग्नको लागि व्यवस्थित छन्; तिनीहरूले आफ्नो कपालमा अर्को तरिका पत्ता लगाएका छन् स्वतन्त्र र मोहक महसुस गर्नका लागि।
लामो केश कटाई समयको साथ शक्ति प्राप्त गर्‍यो र उनीहरूले पुरुष कपालको अभ्यास पनि परिवर्तन गरेका छन्। धेरै पेशागत ग्राहकहरु राख्न कटौती मा आफ्नो शैली र समाधान अद्यावधिक गर्नु पर्छ।
लामो कपाल संग पुरुषहरूको छवि भीडमा सधैं बाहिर खडा हुनुहोस्। ग्यालेन्टहरू, बोल्ड, बौद्धिक, साहसी, युवा र अन्य धेरै तपाईंले मोहक केश लगाउन सक्नुहुन्छ; सत्य यो हो कि एक तरीकाले वा तिनीहरू वरिपरि सबैको रुचि कब्जा।
यो आवश्यक छ कि जोसँग यो नयाँ फेसनमा सम्मिलित हुन आँट छ, यसलाई गम्भीरतासाथ लिनुहोस्। हुनसक्छ उनीहरूले अब कपाल कायम राख्न हेयरड्रेसरको भ्रमण गर्नुपर्दैन, तर उनीहरू चम्किलो र स्वस्थ कपाल देखाउन अन्य हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ। र यी उपचारहरू घर वा पेशेवरहरूसँग गर्न उपलब्ध छन्। जुन पनि विधि छनौट गरिएको छ, महत्त्वपूर्ण कुरा मर्मत हो।
२०१ In मा पुरुषको हेयरस्टाइलमा प्रवृत्ति लामो र मध्यम कपाल छ। त्यहाँ विकासको समय छ जब स्टाइलिंग गाह्रो छ, तर यो छ चतुराई र समय को कुरा। बिस्तारै यो आधुनिक कटौतीको उत्तम प्राप्त गर्न सम्भव छ।
1 लामो कपाल काट्ने प्रकार
1.1 जंगली काट
1.2 सर्फ अदालत
1.3 मुन हेयरस्टाइल
2 लामो कपाल कटाई को साथ प्रसिद्ध ट्रेंडसेटर
3 पुरुषहरूको लागि लामो कपाल हेरचाह सल्लाह
4 Hipster Cut: वर्षको पुरुषको लामो हेयरकट
लामो कपाल काट्ने प्रकार
यो हो पुरुषहरू द्वारा छानिएका जो लापरवाह शैली देखा पर्न चाहन्छ। सतह मा, केश को लागी कुनै समय दिईएको छैन, तर वास्तविकतामा तिनीहरुले यस जस्तो देखिनु भन्दा बढी समय खर्च गर्छन्। यदि कपाल प्रत्यक्ष वा ठीक छ, यो अन्तमा एक shredding गर्न सल्लाह दिइन्छ।
तरंगहरू भएका पुरुषहरूका लागि यस प्रकारको केश धेरै व्यावहारिक र लगाउन सजिलो हुन्छ। रोलरहरूले ठ्याक्कै चाहेको मात्रा र जंगली लुक दिन्छ।
यदि मानिससँग अनुहारको नाजुक सुविधाहरू छन् भने, एक दिन दाह्री संग यो शैली साथ यो उसलाई मर्दानगी दिन्छ।
हल्का, लहरदार कपाल एक राम्रो विकल्प हो। केहि घामले धुनु भएको प्राकृतिक र color्ग लगाउँदछन्, अरूले केहि हाइलाइटहरू हाइलाइट गर्न स्टाइलिस्टमा जान सक्छन्। यो एउटा पक्षहरूमा असमान लम्बाइको साथ धेरै प्राकृतिक शैली; अवसरमा निर्भरता, यसलाई लुगा वा टाँसिन सकिन्छ।
यो महत्वपूर्ण छ पट्टि चिन्ह नलगाउनुहोस्, तर विकासको आधारमा यसलाई बिभिन्न पक्षमा ड्रप गर्न। केही औपचारिक पार्टीको लागि पनि रातमा तपाईं जेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फिक्सिभ
यो त्यस्तो शैली हो जुन धेरै लामो कपालको साथ पुरुषहरूको चरित्र गर्दछ, जबसम्म उनीहरूसँग सावधानीपूर्वक कपाल हुन्छ तबसम्म अराजकको भावनामा नपरोस्। यो एक केश शैली हो यसको सरलता र सुन्दरताको लागि बाहिर खडा छ। एक पोनीटेलबाट अन्तिम पास थिचेर छोडियो; परिणाम एक रोटी वा डबल पुच्छर हो।
यो शैली आज महिलाहरू द्वारा व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ। सामान्यतया यो यसमा रहेको कपालको सहज र हेरचाहको लागि छनौट गरिएको हो; यसले दुबै लाई दिनको काममा जान र रातमा भोजमा जान दिन्छ।
पुरुषहरु मा विस्तार छ अगाडि कडा छोड्नुहोस्। बरु, यो अनुहारमा नपरोसिकन, लुकाउनुपर्दछ।
फेशन को महान connoisseurs सही प्रवृत्ति २०१ as को रूप मा यस लामो कपाल कटौती परिभाषित। फरक देखिने बनाउन सकिन्छ र महिलाहरु को लागी ग्यारेन्टी छ।
यो काटको लागि लम्बाइ काँधमा केहि इन्च छ। प्राप्त गर्न सकिने शैलीहरू फरक फरक हुन्छन् तपाईले यसलाई आकार दिन रोज्नु भएको तरीकामा निर्भर गर्दै। यसलाई सीधा वा मापन गर्न सकिन्छ, यद्यपि अर्को विकल्प पक्ष, मध्य वा पछाडि कंघी गर्नु हो।
लामो कपाल कटाई को साथ प्रसिद्ध ट्रेंडसेटर
जोनी दीप: यसको रहस्यमय र आरामदायी उपस्थितिको साथ उसले लामो लामो कपाल लगाउँदछ एक व्यक्तिगत हलमार्कको रूपमा। यसका छालहरूले यसलाई एकै समयमा गडबड र सफा देखिने बनाउन यो राम्रो आवाज दिन्छ।
क्रिस हेम्सवर्थ: यो अभिनेता सीधा कपाल संग ती पुरुषहरूको लागि आवश्यक एक एक कदम कटौती छ। शैलीले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ आवागमन प्राप्त गर्नुहोस् र अनुहारको हाइलाइट हाइलाइट गर्नुहोस्।
ब्राड खाडल: थियो प्रख्यात बीचमा लामो कपाल को अग्रदूतहरु मध्ये एक। बीचमा छुट्टिँदा, यसले केहि हाइलाइटहरू लाईट गर्न प्रभावलाई जोड दिन्छ; उहाँ केहि घटनाहरूका लागि साइड बैंग्सको साथ पनि देखिएको छ।
किट Harington: उनको कर्लहरु संग उनी हासिल गर्छन् एक शान्त र आकस्मिक प्रभाव। तर उनी वास्तवमै आफ्नो समय बिभिन्न ध्यानपूर्वक खर्च गर्दै फर्केर आउँदछ; वास्तवमा, कपाल कायम राख्न विशेष उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरुषहरूको लागि लामो कपाल हेरचाह सल्लाह
स्टाइलिश लामो कपाल काट्न, केहि सुझावहरू अनुसरण गर्न सकिन्छ:
धुलाई को लागी उत्पादन ध्यानपूर्वक छनौट गर्नुहोस्, कपाल को प्रकार अनुसार।
नबिर्सनुहोस् कन्डिसनहरू किन्नुहोस् स्टाइलिंग को सुविधा को लागी।
ड्रायर दैनिक प्रयोगको लागि होईन किनभने तिनीहरूले उसलाई घाइते बनाए। तपाईंले यी क्षणहरूको लागि समय समर्पित गर्नुपर्दछ।
यद्यपि उनीहरूलाई कपालमा धेरै भेटघाटको आवश्यक पर्दैन, नियमित रूपमा उनीहरूले जानु पर्छ सुझावहरू छुनुहोस्। त्यसैले कपाल स्वस्थ र बलियो बढ्न सक्छ।
जो कपाल झर्ने बाट पीडित छन् उत्पादनलाई सुदृढ पार्न प्रयोग गर्नुहोस्.
जेलको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने मात्र यो विशेष घटनाहरूको लागि लागू गर्नुहोस्।
ब्रश गर्ने बानी बनाउनुहोस् हरेक रात माने। यसले थकाउने गाँठाहरूलाई वेवास्ता गर्दछ र इच्छित चमक दिन्छ।
Hipster Cut: वर्षको पुरुषको लामो हेयरकट
२०१ In मा, बाहिर खडा गर्न चाहने पुरुषहरूको लागि वर्षको छानिएको एक हो "Hipsters"; यो महान छ किनभने सजिलैसँग कुनै पनि कपाल प्रकारमा अनुकूलन गर्दछ। तिनीहरूलाई काँधको मुनि बढ्न अनुमति दिइनु पर्दछ र त्यसपछि हेयरस्टाइल फरक हुनेछ।
यो हेराई पूरा गर्न, पुरुषहरू तिनीहरूले दाढी सकेसम्म बाक्लो छोड्नु पर्छ। अन्तिम स्पर्श दुबै बाहिर जानु अघि कम्बोमा छ; परिणाम एक बोल्ड, मर्दानी र विद्रोही दृश्य हो; यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि कपाल कहिल्यै अप्रकाशित वा फोहोर देखिनु हुँदैन।
यो लामो कपाल कटाई संग तपाईं आफ्नो कपाल हरेक दिन तल बाहिर जान सक्नुहुन्छ। दिउँसो बाहिर जानको लागि आधा पुच्छरको दुईपट्टि लुक्स साइड भिक्स सँगै राख्न पनि यो उत्तम विकल्प हो; र एक रातको घटनामा तपाईं केही उत्पादको साथ सबै पछि फिर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
त्रिकोणीय अनुहार भएका पुरुषहरू अत्यन्तै मनपर्दछन् जब यी कटौतीहरू बनाउँदै। तह माथि र उनको गाला मा अनुहारको दाग लुकाउन। जहाँसम्म, यो शैली जो कोहीसँग समाहित गर्न सकिन्छ, सबैजना तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरू सहज र विश्वस्त महसुस गर्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » कपाल शैली » पुरुषहरुको लागी लामो कपाल
सुन्दरतामा शिया बटर